Kooxda TPLF oo Shir Kuqabatay Maqale & Xaalka oo Kuxun. | ogaden24
Kooxda TPLF oo Shir Kuqabatay Maqale & Xaalka oo Kuxun.
May 12, 2018 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya in uu kooxda TPLF uga furmay shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen siyaasiyiin, odayaal, ganacsato, aqoonyahan, dhalinyaro iyo qaybaha kale ee bulshada.
Sida xogta aan kuhelayno kooxda TPLF ayaa katashanaysa sidii ay gacantooda ugu soo celin lahaayeen xukunkii sida fudud looga fara maroojiyay ee gacanta ugalay kooxda Oromada ah ee OPDO, kaas oo kacdoon mudo socday ay qoomiyada Oromadu kula wareegtay.
Kooxda TPLF oo mudo 27 sano kabadan wadanka maamulaysay ayaa hada dareentay sida xukunkii looga wareejiyay iyo waliba sida loo bahdilay saraakiishii Tigreega ahayd ee mar wadanka katalin jirtay, waxayna kooxdu dareentay culayska siyaasadeed ee soo food saaray.
Shirkan oo aad looga sooqayb galay ayaa lagu qiimeeyay awooda ay qoomiyadu hada kuleedahay wadanka iyo waliba sida Oromadu ay ugu talo jirto in ay saaxada kasaarto, waxayna dadkii shirka kasoo qayb galay dhamaantood muujiyeen siyaasada cakiran ee qoomiyada Tigreega soo wajahday.
Raysal-wasaaraha cusub ee gumaysiga Itoobiya, Abiye Axmed Cali ayaa markuu xilka lawareegay qaaday talaabooyin dhowr ah oo uu siwayn ugu bahdilay qoomiyada Tigreega, oo mar ahaan jirtay awooda Koobaad, Labaad, iyo sadexaad, wuxuuna raysal-wasaaruhu qoomiyada Tigreega kala dagaalamay awoodii ay kulahaayeen golaha wasiirada.
Dhinaca kale waxaa la ugaadhsanayaa saraakiisha ciidamada wayaanaha ee kasoo jeeda qoomiyada Tigreega, waxaana ladilay tiro badan oo kamid ah saraakiisha Tigreega ah ee shaqooyinka gaarka ah uhayn jiray xukuumadii hore ee wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa Gobolka Owdal ee woqooyiga Soomaaliya lagu dilay 5 kamid ah saraakiisha wayaanaha kuwaas oo sida lasheegay xukuumadii hore ee wayaanaha lashaqayn jiray, sidoo kale waxaa isla shalay magaalada Dirdabe lagu dilay sargaal katirsanaa ciidanka sirdoonka wayaanaha.
Daawo Xubinta Kalamaan oo aad umaadaysan 22/9/2018
Waa Xog waran maadaysan oo wakhtiga la jaan qaadayee Daawasho wacan.
Ururka O Y S U oo magaalada Dhagaxbuur Wacdaro Kadhigay
Waxaa magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar lagu qabtay shir si wayn loosoo agaa ...
Daawo Dr Abdirahman Doolaal oo kahadlay Khilaafka O N L F iyo Isaga
Dr Doolaal ayaa si faah faah san uga hadlay Farqiga udhaxeeya onlf iyo urarada ...
Daawo:Canaasiir China Group labaxday oo magalada Jigjiga kadilaacday.
Bulshada kudhaqan magalada Jigjiga ayaa cabasho xoogan kamuujiyay Kooxo dhalinyaro Abaabulan ah oo magacyo ...
Tv-ga SRTV wuxuu u muuqda inay Heegadii Cabdi iley wali Gacanta kuhayso.
Madaxweyne mustafa omar waxan ku qiimeyn doonaa 90-ka Maalmood ee ugu Horaysa inta uu ...
Daawo:Shirwaynihii Ururka OYSU uu magalada Dhagaxbuur kuqabtay.
Masuuliyiinta iyo Hawl wadeenka Ururka midowga dhalinta iyo Ardayda Ogadenia ee kusugan Gobolka Jarar ...
Daawo:Taliyaha cusub ee Jeel Ogaadeen oo Afka Furtay.
Taliyaha cusub ee Jeel Ogadeen oo Maxamuud Carab oo maalmo kahor xilka lawareegay ayaa ...
Police-ka Addis ababa oo Kumanaan dhalinyaro Axmara ah xabsiga dhigay.
Magaalada Addis ababa waxaa kabilawday Hawlgal balaadhan oo Guryaha loogu daadanayo dhalinyarada kasoo Jeeda ...
Daawo:Xog-hayaha Guud ee OYSU oo kawarbixinaya waxa u Qabsoomay.
Waxaa wadanka Ogadenia mudo bil iyo siyaada ah kusugan wafdi uu Hogaaminayo xog-hayaha Guud ...
Dareenka Hadheeyay boqashadii madaxwyne Mustaf ee xidhitaanka Jeel Ogaadeen.
Madaxwaynaha dawlada degaanka Somaalida Ogadenia mudane Mustafe oo ay weheliyaan maxaabiis Hore oo maanta ...